प्रधानमन्त्री ओलीकै अगाडि बालुवाटारमा भनाभन ! - Everest Dainik - News from Nepal
प्रधानमन्त्री ओलीकै अगाडि बालुवाटारमा भनाभन !
काठमाडौ‌ं, असोज २ । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न निर्मला पन्तका आमा बाबुसहितको टोली सोमबार बिहान बालुवाटार पुगेको थियो । नेकपा नेतृ एवं सांसद निरु पालले प्रधानमन्त्रीले टोलीका तीनजनालाई मात्र भेट्न सक्ने जानकारी गराएकी थिइन् ।
दुर्गादेवीपछि कांग्रेस नेता साउदले बोले । उनले अनुसन्धानमा चरम लापरबाही भएको भन्दै गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: kanchanpur, Nirmala Pant, pm oli, Rape